YOUTUBER မှကမကထပြုသော INSTAGRAM သည်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထက်မဆို ပို၍ ဆိုးသည် - သတင်း
ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်များစွာလုပ်ဆောင်ပေးသည်၊ နာရီပေါင်းများစွာအရည်အသွေးရှိသောဖျော်ဖြေမှုများကိုအခမဲ့ပုံမှန်လုပ်ခြင်းမှသည်ပြဇာတ်များနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားတက်စေသည့်အထိ၊ ၎င်းတို့သည်အဓိကအလုပ်သမားများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရနိုင်သည်။ ပြီးတော့သင်ကသူတို့ရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာများ၏အခြားပုံစံများကိုကူးတဲ့အခါမှာသူတို့သတိထားမိလိမ့်မယ်, ငါတို့ကြင်နာအလုံအလောက်ကျနော်တို့ကိုတောင်ငါတို့လိုချင်တယ်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှကြောင်းထုတ်ကုန်နင်းဖို့ကြိုးစားနေခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်တ ဦး တည်းခြေလှမ်းယူဖို့ပါပဲ။
အကယ်၍ ယခင်စာပိုဒ်၏စကားများမှာသင့်အပေါ်ဆုံးရှုံးသွားလျှင်၊ ၎င်းကို၎င်းအားပိုမိုတိကျသောနည်းလမ်းအဖြစ်ထားပါစေ။ ဤအမူအကျင့်များသည်ပိုက်ဆံများကိုယူရန်ဘာကိုမဆိုလုပ်လိမ့်မည်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့တွင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောထုတ်ကုန်များကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ In ။ ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုရောင်းဖို့ YouTubers ကြိုးစားခဲ့တာကပိုအရေးကြီးတဲ့ကြော်ငြာတွေကိုကြည့်ရအောင်။
Alfie Deyes သည် Sky နှင့်သူ၏နောက်ဆုံးစပွန်ဆာပေးမှုတွင်ပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူအပြည့်အ ၀ ရှိသည်
အေဒီသိတဲ့အတိုင်းပဲငါဟာအကြီးမားဆုံးရာဇ ၀ တ်မှုပရိတ်သတ်ပါ။ ငါအပန်းဖြေလဲလျောင်းစတင်ခြင်း & 15 မိနစ်အကြာငါဘယ်သူနှင့်ချိတ်ဆက်မယ့်သူနှင့်အဘယ်သို့သောအရာတို့ကိုအထဲကထွက်သွားဖို့သွားနေကြသည်ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေထိုင်နေတယ်! @skytv မှ Sky Crime တွင် 'ကျွန်ုပ်သည်အမှောင်ထဲတွင်ရောက်နေပြီ' ကိုယခုသင်မရရှိပါကစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကငါ့ကိုကြင်နာစွာငါ့ကိုစောစောစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သကဲ့သို့ငါကအားလုံးကိုစောင့်ကြည့် & ဒါဟာနောက်အဆင့်ကိုဖွင့်! သင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမှတ်ချက်ပေးရာတွင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအမှတ်အသားပြုပါ။
မျှဝေသည် Alfie Deyes (@alfiedeyes) သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်၊
အစဉ်မပြတ်ငါကပြောသည်ပါတယ်။ သငျသညျသူသည်မိမိအဆိုဖာပေါ်တွင်တင်ငတ်မွတ်သိပ်သည်းအိပ်မက်ဆိုးအချို့အတွက်ဖွင့်တူသော Alfie Deyes ရှာဖွေနေကိုမြင်လျှင်ထက်ပို Sky ပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့ပြစ်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်စေသည်ဘာမျှရှိပါတယ်။
ဤဖော်ပြချက်၏ဒုတိယဝါကျသည်သြဇာညောင်းဆုံးမြှင့်တင်ရေးမိတ္တူအချို့ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီးသြဇာညောင်းသည့်အကောင့်တွင်တင်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သူမနှင့်ဝေးသွားပုံရသည်။ တွစ်တာပေါ်တွင်အကြီးအကျယ်သုတ်ခြင်းနှင့်အတူလိုက်ကြ၏ တစ်ခုသောထိုကဲ့သို့သောလှောင်ပြောင်သရော်မှုများသည်သူ၏မူလဓာတ်ပုံနှင့်တူသောပမာဏနီးပါးတူသည် ။
ဓာတ်ပုံတွေဟာစာသားမပါဘဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အတွက်ရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့တောင်မှအဲဒီလိုပုံကြီးချဲ့ပြီးမိုက်မဲတဲ့မြင်ကွင်းပဲ။ Alfie အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းကကိုင်တွယ်ရတာလွယ်ကူပြီးလူတိုင်းကမင်းကိုမုန်းတယ်။
အိုး Zoella ဟာအမြဲတမ်းစုံထောက်စစ်ဆေးသူဖြစ်ချင်နေတယ်
ကြော်ငြာ• အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောစစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ပါက Michelle McNamara ကို အခြေခံ၍ ရောင်းသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ် @skytv docu-series သစ်ကိုကျွန်တော်စွဲလမ်းနေလိမ့်မည် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်း ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းရုန်းရင်းဆန်ခတ်အကြမ်းဖက်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့်သူမကိုယ်တိုင်သူမ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်သင်သူမကိုလိုက်နာခြင်း! ငါငါ့အတွင်းစိတ်စုံထောက်ထွက်နထေိုငျက Sky GO ပေါ်မှာ binging တစ် ဦး preview ကိုပြီးသားကြောင့်ကောင်းပါတယ်။ ငါစစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များစွာနှင့်စီးရီးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ငါပညာရှင်များမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသူတို့ကိုပေါ်ထွက်လာစောင့်ကြည့်တာနဲ့အမျှနက်နဲသောအရာဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေတဲ့စုံထောက်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်။ ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုမ ၀ င်ခဲ့ရင်စုံထောက်စစ်ဆေးရေးမှူးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြောခဲ့တာကလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး (အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါစေ၊ တီဗီမှာကြည့်ရတာထက်အများကြီးပိုခက်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် Michelle တော်တော်လေးမယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ။ #IllBeGoneInTheDark သည်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Sky Crime တွင်စတင်ခဲ့သည်။ (ဤသည်မှာကြည့်ရှုလိုလျှင်နှစ်သက်နိုင်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများစွာကျူးလွန်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်နေသည်) ။ စစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုသည့်စုံထောက်ကစားသူသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအမှတ်အသားပြုပြီး၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ sky #skyqvip
မျှဝေသည် Zoë Sugg (@zoesugg) သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊
Zoella သည်သူမ၏ဘလော့ဂ်များတွင်စုံထောက်စစ်ဆေးရေးမှူးဖြစ်လိုသည်ကိုဘယ်တော့မှရပ်တန့်ရန်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါ။ ငါဆိုလိုတာကသူမအမြဲ Alfie နှင့်အတူလက်ထိတ်ခတ် roleplay လုပ်နေနှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ခွေးပုခွေးတစ်ကောင်ကိုယူနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဟန်ဆောင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ဒီသူမကအရေးအသားသို့ထည့်သွင်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြောင်းလိုက်တယ်လား
သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်စစ်မှန်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုအစီအစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့စုံထောက်ကစားနေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေနိုင်သည့်လူများစွာသည်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်ရမည်ကိုပင်မသိပါ။
ဂျင်မ်ချပ်မန်းကလူတိုင်းကိုလုံးလုံးလျားလျားမထိန်းချုပ်ရသေးသည့်ရိုးရိုးပဟေizိမေးခွန်းများဖြင့် Sky ကိုကြည့်ရှုစေလိုသည်
အေဒီ | သော့ခတ်ပိတ်ထားချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအရာများကိုအများဆုံးအသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေသည် - ၎င်းတွင်တီဗွီရှိုးအသစ်များထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်။ #SaveMeToo သည် @skytv တွင်ယနေ့ညစတင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆာရာနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရာသီပထမတစ်ခုမှမည်သူသည်အဘယ်သူသတိရဆုံးဖြစ်သည်ကိုသိနိုင်ရန်အရက်ဆိုင်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်လိုက်သည်။ အခိုက်အတန့်လေးများလုပ်ရန်ရွှင်လန်းမှု
မျှဝေသည် ဂျင်မ်ချပ်မန်း 10:49 pm တွင် PDT မှာ2020ပြီလ 1, 2020 တွင် (@jimchapman)
ဤကမကထပြုသောပို့စ်မှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနိုင်သောအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ပထမ ဦး စွာဂျင်မ်နှင့်စာရာတို့သည်ကျွန်ုပ်သည် Save Me Too အချိန်ကာလတစ်ခုကိုအလွန်ချစ်ခင်ကြသည်။ အဘယ်သူသည်ထို့နောက်မေးခွန်းများကိုထွက်ဖတ်နေတာလဲ ဉာဏ်စမ်းပဟေizိတစ်ခုရှိခဲ့ရင်သူတို့ဟာဓာတ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်ပဲယူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် OG YouTuber ဂိုဏ်းသည် Peroni ပုလင်းများကို ၀ ယ်ပြီးသီးခြားဖန်ခွက်ထဲသို့လောင်းရန်မျိုးဖြစ်လျှင် Jim Chapman ဖြစ်သည်။
ငါဒီကနေအဓိက takeaway အချို့ဂရုတစိုက်ထားရှိမြေပဲ, scrabble ရင်ပြင်များနှင့်စက္ကူကြီးမားသောအပိုင်းအစပေါ်သို့ scribb ငါ့ကိုလွန်းပဟေSAိ SAVE သူတို့ကြိုက်တယ်ချင်ပါတယ်သကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချကြသည်မဟုတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကောင်းပြီ၊ အချိန်နည်းနည်းလေးကိုလုပ်ဖို့ရွှင်လန်းမှု
အိုလီဝှိုက်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည်မ Mauritius ရှိကမ်းခြေပေါ်တွင်မပြည့်စုံကြောင်းသတိပေးသည်
ဘယ်သူပိုကောင်းတာလဲ။ ဘေးဖယ်ပြက်လုံး ... တစ်ခါတစ်ရံဘဝကယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံသောမဟုတ်ပါဘူးနှင့်အလွန်လွှမ်းမိုးသောနိုင်ပါတယ်။ @Headspace ကိုနေ့စဉ်ဘ ၀ ၏ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏တရားရှုမှတ်ခြင်းနှင့်သတိရခြင်းခရီးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားတွေ Headspace ကိုစမ်းကြည့်ဖူးလား။ #Ad #headspace
မျှဝေသည် ဖြူတယ် (@oliwhite) ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်၊
တခါတရံမှာဘဝကတကယ်တော့မစုံလင်ဘူး၊ အရမ်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်၊ ဒါကငါလုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ဒီပုံမှာငါနဲ့ငါ့ရည်းစားက Mauritius မှာရှိတဲ့£ 10k အားလပ်ရက်ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားနေရတယ်ဆိုတာပဲ။
မင်းက Headspace လိုလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့ Mauritius တို့လိုအားလပ်ရက်တွေကိုဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မပြုတဲ့သူနဲ့ငါ့မထိုက်မတန်တဲ့ရည်းစားလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်မင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ငါအမှန်တကယ်ငါအကြောင်းမောရစ်ရှပ် vlog လုပ်သောငါ၏အ Mauritius အားလပ်ရက်များအတွက်ပေးဆောင်ပါတယ်။
# ဒီအမြင်ကဒီမှာ @visitsaudi #welcometoarabia ရှိလူများကဲ့သို့တင့်တယ်လှပသည်
မျှဝေသည် Caspar လီ 9:51 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 27, 2019 ရက်တွင် (@caspar_lee)
wow, Caspar အခန်းကိုဖတ်ပါ။ သူသည်ဤအဘို့သူ၏မှတ်ချက်များအပိုင်း၌ဆေးကြောတယ်, သင်ဆော်ဒီအာရေဗျအကြောင်းကိုဘာမှသိလျှင်, အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့တော်တော်လေးရှင်းပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရသောမြို့တော်နှင့်လိင်တူချစ်သူများကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာအားလုံးကိုလုံးလုံးလျားလျားထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကဆပ်ကဆော်ဒီအာရေဗျရှိလူများသည်လှပသောသူများဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်ငယ်ရွယ်, လစ်ဘရယ်ပရိသတ်ကိုဖြည့်တင်းရန်အဘို့, သူသည်ထိုကဲ့သို့သောနေရာတစ်နေရာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုပြောပြရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါသူကယ့်ကို ဦး ခေါင်းပေါ်လက်သည်းထိမှန်ခဲ့ပါဘူး။
Oli White ကသူ့ရည်းစားကို KFC အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ထိုးသည်
Evie ကနမ်းဖို့အတွက်ဝင်ခဲ့တယ်။ ငါ KFC နဲ့ဝင်လိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုယခုနှစ်တွင်လွဲချော်ခဲ့ဖူးသောအရာများနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောခဲ့သည်။ @kfc_uki ကနေ့ကိုကယ်တင်ရန်နှင့် NOMO ဟုပြောရန်အတွက်တက်သည်။ စနေနေ့ ၂၅ ရက်တွင် ၂၄ နာရီသာ Zinger Stacker ဘာဂါမှသင် ၅၀% ရနိုင်သည်။ သင်၏အနီးဆုံးစားသောက်ဆိုင်သို့သွားပြီး KFC NOMO သဘောတူညီချက်တောင်းခံပါ။ 🤤 #NoMoreFOMO #KFCNOMO #ad
မျှဝေသည် ဖြူတယ် (@oliwhite) ဇူလိုင် ၂၄ ရက်၊
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆို KFC ကငါတို့ဆီလာပြီးသူတို့နောက်ဆုံးစာချုပ်ကိုတိုးမြှင့်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဂဏန်းတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုသေချာအောင်လုပ်မလဲ။ ah င်, Instalikes များအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ကောင်မလေးထွက် crack ။
တနည်းကား, Oli White ကစာသားသူမြှင့်တင်ရန်ခံရဖို့ထင်ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးကြောင့်အမှန်တကယ် Hilary င်သောကမကထအကြောင်းအရာဖန်တီးရုံဤမျှလောက်ကောင်းလှ၏။
Anastasia Kingsnorth သည်ရှပ်အင်္ကျီများကို ၀ တ်ဆင်ပြီး ၀ တ်ဆင်သည်
ကြော်ငြာကျွန်ုပ်၏ရှပ်အင်္ကျီကိုဤကဲ့သို့သောအစဉ်အမြဲဝတ်နိုင်ပါသလား။ 10% လျှော့စျေး ANAK10 #babesofmissguided!
မျှဝေသည် Anastasia Kingsnorth (@anastasiakingsnorth) ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂ ရက်နံနက် ၇:၂၁ နာရီတွင် PDT
သင်စဉ်းစားနေသောအရာကိုငါသိ၏ အလှအပနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ YouTuber ကအဝတ်အစားကိုမြှင့်တင်တယ်၊ ဘာအကြောင်းထူးလဲ။
ကောင်းပြီ, ပြissueနာရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပူးတွဲစာတန်းနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ လိုချင်သည်မဟုတ်ပါကသင်မလုပ်ချင်ပါကမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ထာဝရလား ဘာလဲ?!?
အစမှအဆုံးအထိ, ဒိုမီနိုရဲ့ဒီ Caspar Lee skit ကားတစ်စီးပျက်ကျသည်
ငါ့စွမ်းရည်အားလုံးလိုအလဟ got ကုန်သွားတယ်
အေဒီ | မင်္ဂလာပါ၊ ညမအိပ်ပဲကျွန်တော် #NationalPizzaDay အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအရမ်းဆိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်တယ်။ အဲ့ဒီနည်းနဲ့ @Dominos_UK ကိုမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပို့လိုက်ရင်သင် SO နဲ့မတူတော့ဘူး။ #DominosValentine
မျှဝေသည် Caspar လီ (@caspar_lee) ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်၊ ၂၀ ရက်၊ မနက် ၃း၀၀ နာရီတွင် PST တွင်
၎င်းသည်အလွန်များပြားသောပီဇာကုမ္ပဏီမှတန်ဖိုးကြီးသောစုံတွဲတစ်တွဲအတွက် crass clickbait မှတစ်ဆင့်သူ၏ဆက်ဆံရေး၏အုတ်မြစ်များကိုနှိမ်နင်းခြင်းလား၊ သို့မဟုတ်ထိုက်တန်သောသရုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီ #ad သည်သင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့မရဘူးလား။ ဒါကထိုကဲ့သို့သောအိုလီဖြူပြောင်းရွှေ့ပါတယ်။
Josh Pieters သည် KFC ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်များ Caspar နှင့် Oli နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်
ဘဝ၌အချို့သောရွေးချယ်မှုများခက်ခဲပါတယ်, ဒီတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုများကိုမနက် ၉ နာရီတွင်သင် @kfc_uki သို့သေချာစွာသွားပါ။ #KFCinCommand #ad
မျှဝေသည် Josh Pieters (@joshua_pieters) ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်၊
fuck ဆိုတဲ့ဘို့အလိုငှါအဘို့။ ယခုငါ YouTubers အထီးများကဤကမကထပို့စ်များကိုအတွက်အသုံးပွုတူညီနည်းဗျူဟာအဟောင်းအပေါ်ကိုတက်ခူးပြီးပြီ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်မည်သည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမပါဘဲအသုံးပြုသည်ကိုကြည့်ဖို့တကယ်တော့အလွန်အမင်းဝမ်းသာစရာပါပဲ။ အဘယ်သူသည်ဤအပေါ်ပယ်လက်မှတ်ထိုး?!
DUR MAN သည် sexy မိန်းမနှင့်အစားအစာတို့အကြား ရွေးချယ်၍ သူသည်အစားအစာကိုကောက်ယူသည်။
•သင်၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ယခုအထိသင်နှစ်သက်သော YouTubers အားလုံးကဘာတွေလဲ။
•ဉာဏ်စမ်းပဟေIZိ - သင်၏ YouTube အလုပ်ကိုစီစဉ်ပါ။ သင်မည်သည့်ယူနီဖောင်းကိုသင်သွားသင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်
•ဤအရာများသည် YouTuber ၏အကြီးအကျယ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်သည်